बेलायतमा नेपालीहरु ठूलो समस्यामा छन् – गुन्जेश्वर न्यौपाने (कुराकानी) – Hotpati Media
बेलायतमा नेपालीहरु ठूलो समस्यामा छन् – गुन्जेश्वर न्यौपाने (कुराकानी)
११ बैशाख २०७७, बिहीबार ०९:२४ मा प्रकाशित (5 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ५ मिनेट
बेलायत – गुन्जेश्वर न्यौपाने १५ बर्ष अघि अध्ययनको शिलशिलामा बेलायत पुगेका थिए । पढाईसंगै स्थानिय सरकारका सोसल वर्करको रुपमा करिब १२ बर्ष काम गरेपछि यही बर्षको फेब्रुअरीबाट आफना परिवारसँग मिलेर रेष्टुरेण्ट व्यवसाय शुरु गरेका थिए ।
व्यवशाय शुरु गरेको केही समयमै लकडाउनले उनको व्यवसाय ठप्प भयो । पहिलो पटक नोभेम्बर १७,२०१९ मा चीनको हुवान प्रान्तमा देखा परेको कोरोना भाईरस कोभिड १९ अन्य मुलुकमा विस्तारै विश्वभर फैलिन थालेपछि मानिसहरु त्रसित भएका छन् ।
बेलायतमा झनै हाई प्रोफाईलका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएपछि जनतामा त्रास छायो । प्रिन्स चाल्र्स, प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनमा कोरोना पुष्टि भयो यद्यपि दुवै जना निको भैसकेको त्यहाँ सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।
१६ जना नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । कस्तो छ त नेपालीहरुको पछिल्लो अवस्था ? सोसल वर्कर गुन्जेश्वर न्यौपानेसँग हटपाटीका लागि ऐश्वर्य श्रेष्ठलेकुराकानी गरेका छन् ।
लकडाउनको बेला कसरी दिनचर्या बिताइरहनु भएको छ ?
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाले यहाँ युकेमा १६ जना नेपालीले ज्यान गुमाईसके, त्रासमै छौ हामी पनि । हुनत यो समय परिवारसँग बिताउने मौकाको रुपमा पनि लिएको छु । म आफै भने परिवारसँग पार्क जाने गर्दछु । यहाँ सामाजिक दुरी कायम गरेर पार्कमा बस्न पाइन्छ । नेपाली फिल्म तथा कमेडी सो हेर्ने तथा अनलाईन लर्निेङग पनि गरिरहेको छु ।
के को सिलसिलामा, कहिले बेलायत जानुभयो ?
पढाईसंगै, कामका लागि गएको थिए ।
कति लगानीमा शुरु गर्नु भएको थियो रेष्टुरेण्ट केही समयमै बन्द गर्नुपर्दा तपाईलाई ठुलै क्षति बेहोर्नुपरयो होला नि ?
सत्तरी हजार पाउण्ड (एक करोड ५० लाख बढी) को लगानी परेको छ, अझै लगानी भैरहेको छ । लकडाउनले ठुलो मारमा पारेको छ । कोरोनाले गर्दा लगानी अझै बढने देखिन्छ । नयाँ किसिमले हाइजेनिक सर्भिसको लागि सामानहरु थप्नुपर्ने हुन्छ । मजस्ता भर्खर व्यवसाय शुरु गरेका व्यापारीहरुलाई व्यवसाय पिक अप गर्न कम्तिमा एक बर्ष लाग्छ ।
चीनबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस अहिले विश्वभर तीव्ररुपमा फैलिरहेको छ बेलायतमा प्रभाव कस्तो छ ?
हजुर, युकेमा एक लाख २९ हजार बढीलाई कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भैसकेको छ । १७ हजार बढिको मृत्यु भैसकेको छ । यहाँ मर्नेहरु अधिकांश पेन्सनर र पुराना रोगहरुबाट ग्रसित रहेकाहरु छन् । मर्नेहरुमा कालाजाति र एसियन मुलका धेरै रहेको पाइएको छ । बेलायत सरकारले यी मुलका मानिसहरु नै किन मरी रहेका छन् भनेर केही डाक्टरहरुको दबाब पछी रिसर्च गर्ने प्रतिबदता जनाएको छ । कोभिड १९ले नेपाली समुदायमा, बिशेष गरि एक्स गोर्खा नेपालीहरुमा धेरै असर गरेको देखिन्छ ।
बिशेष गरि पब्लिकसँग सिधै सम्पर्क गर्नु पर्ने कामहरूलाई धेरै असर गरेको देखिएको अनुमान गरिएको छ यद्यपि यस बारेमा रिसर्च हुन बाँकी नै छ। हाल मानविय मृत्युको असरसँगै आर्थिक असरको नतिजा अहिले नै देखा नपरे पनि निक्कै ठुलै धक्का हुने स्थिति रहेको छ । यो बर्ष १३ प्रतिशतले युकेको अर्थतन्त्र संकुचित हुने OBE (Office of Budget Responsibility)ले अनुमान गरेको छ । सामाजिक रुपमा अपराध बढने अनुमान सबैले गरिरहेका बेला घरेलु हिँसा बढीरहेको न्यूजपेपरहरुमा समाचार आएका छन ।
बेलायतमा कति नेपाली कार्यरत रहेका छन् विषेशगरी कुन क्षेत्रमा आवद्ध छन्, उनीहरुको अवस्था कस्तो छ ?
एक लाख भन्दा बढी नेपालीहरु युकेमा रहेका छन् । नेपालीहरु मुख्य गरी सेना, होटल रेस्टुँरा र सिक्युरिटी काममा कार्यरत रहेका छन् । यसको अलावा केयर होम्स, सप्स, फ्याक्टरी जस्ता क्षेत्रमा पनि आवद्ध छन् । यतिबेला हस्पिटल,केयर होम्स, सप्स तथा सेक्युरिटीमा काम गर्नेहरु काममा जानुपर्छ । यो क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरु असुरक्षित रहेका छन् ।
युकेमा धेरै नेपाली विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन्, लकडाउनमा धेरैलाई समस्या होला, त्यसमा पनि अध्ययनको सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका नेपालीले त्यहाँको नागरिक सरह सुविधा पाउँछन्, वा राहत पाएका छन् ?
अध्ययनका लागि आएका नेपालीहरु काम गरीरहेका छन् भने सरकारले अन्य नागरिक सो सरह ८० प्रतिशत वेज Pay गर्ने भएको छ । हप्ताको २० घण्टा काम गर्ने विद्यार्थीले कमाइको ८० प्रतिशत रकम पाउने देखिन्छ । यसले खाना पुग्ने देखिन्न । अन्य सहयोग भने सरकारबाट सहयोग हुने देखिन्न ।
तपाईको सम्पर्कमा बस्न, खाना समस्यामा परेका नेपालीहरु कोही सम्पर्कमा आएका छन् ?
केही विद्यार्थीहरुलाई खान बस्न समस्या भएको सामाजिक सन्जालमा आए पनि हामी बसेको क्षेत्र र Birmingham वरिपरि यस्तो सुनिएको छैन् । नेपाली स्टुडेन्टहरुको संस्था Merging Nepsocs ले नेपाल युके दुतावासको सहयोगमा समस्यामा परेका नेपाली विद्यार्थीको लागि आर्थिक संकलन गर्ने र खाना बाड्ने तथा केही व्यक्तिको व्यक्तिगत पहलमा सहयोग गरिएको कुरा छ । दुतावाससँग नेपालीहरुको तथ्यांक नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
कोरोनाको संक्रमण रोक्न त्यहाँको सरकारले कस्तो रणनीति अपनाएको छ ?
बेलायती सरकारले आंसिक लकडाउन गरेर अत्यावश्यक सेवामा काम गर्ने बाहेक अन्य क्षेत्र बन्द गराएको छ । यसलाई लागु गर्न पुलिस परिचालन गर्नुका साथै मोबाईल नेट्वोर्क कम्पनीसँग युजर डाटा मागेर मनिटरिङग गरिएको छ । सरकारले Rule Break गर्नेलाई चेतावनी दिने, तत्काल फाइन गर्ने काम गरेको छ ।
त्यहाँ रहेका नेपाली के नेपाल आउन चाहन्छन यदि चाहन्छन भने कुनै सरकारी पहल भएको छ ?
केही नेपालीहरु नेपाल आउन चाहेको खबर सुरुका दिनमा आए पनि पछिल्ला दिनमा नेपाल फर्किन खोजेको खबर सुनिएको छैन । तत्कालका लागि Visitors र Students का रुपमा रहेका नेपालीहरुको विवरण लिएर राहत् पुराउने प्रयास गर्नु राम्रो देखिन्छ ।
नेपालमा पनि विस्तारै कोरोना फैलिदो छ के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ नेपालीहरुलाई ?
हरेक चीज समयसंगै परिवर्तनशील छ । समयअनुसार हामीले लडन सिक्नुपर्छ । सरकारले दिएको गाईडलाइनको पालना गरेर सामाजिक दुरी कायम गरौं । भिडभाडमा नजाने, मास्क लगाउने, सके पन्जा र चस्मा लगाउने। यसरी नै बच्नुपर्छ ।
‘फ्रान्समा लकडाउन उल्लङ्घन गरे १ सय ३५ यूरो जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्था छ ‘ – प्रशान्त उप्रेती व्यबसायी